About Us - Shijiazhuang Yichen Plastic Floor Co., Ltd
YICHEN SOPRTS Plastic uriri CO., LTD
Nokutenda zvakanaka uye hwakanakisisa, tiri kuva dzakawanda muchiso mutungamiriri epurasitiki paburiro.
boka redu kuwanikwa muna 2006. Zvinonzi hwakabuda State uye Collective Wakaroorwa enterprisewho wakasikwa 1984, mumwe piyona kuti kutsvakurudzwa & Kukudziridza uye unobereka PVC epurasitiki flooring. Tine pachake nyanzvi akazvimirira tsvakurudzo uye kukura chikwata chedu, kuti akavimbisa hutungamiri kwedu Chinese PVC epurasitiki flooring maindasitiri mumakore akawanda kudaro.
Pakutanga pakagadzwa Yichen, isu kazhinji kupa edu vakazvimiririra akaongorora uye vakava PVC mitambo dzakatevedzana flooring dzedu dzokudya &
dzakawanda Distributor uye injiniya kambani, kuwana mukurumbira wakanaka kwazvo kubva makasitoma edu. Panguva iyoyowo, isu kutora theinnovation sezvinoita kukura pfungwa, rambai kutsvakurudzwa uye kusimukira zvigadzirwa zvitsva. Muna 2014, tiri yakatanga akatevedzana ezvokutengeserana flooring, kusanganisira machena zviyo yakatevedzana PVC flooring, UV kukireshi yaitevedzana PVC flooring, PVC yezvokutengeserana flooring pamwe arambe achirema aizomubatsira nezvimwewo, achipa mamwe yepamusoro uye
Tabuda chitupa ISO: 9001, ISO14001, BV wokuFrance, BWF uye CE etc. Uyezve, isu akava nhengo Hebheri pekamuri E-Commercial uye mumwe kuvimbika Director zvebhizimisi kuti Yanzhao Chamber of E-Commercial muna 2013 . Hebei Chamber of E-Commercial ndiye wokutanga ekisipoti kutengeswa mukamuri ezvokutengeserana muna Hebei province.
We Yichen vanhu vanoteerera zvebhizimisi mweya "kuzvibata munzanga kubudikidza nokutendeka, kubudirira kwedu basa nokutenda, kurarama tiine unhu, kuva ne kuwirirana." Uye tora "Pane chete murangariro kure-mwaka, asi hapana kure-mwaka musika ; Pane chete simba pfungwa, asi hapana musika simba "sezvo yedu mashandiro musimboti, kushanda zvakanaka, ichipa zvakawanda yepamusoro unhu zvinhu uye basa nani kupfuura vatengi. Yichen ndiye sarudzo yako zvakanaka ,. ngationei kushanda pamwe chete uye kuvaka remangwana nani pamwe chete.